Qalabka Microbrewery List-News-NingBo COFF Machinery Co., Ltd
Liiska Qalabka Microbrewery
Waqtiga: 2021-12-28 Faallo: 33
1) Warshada hadhuudhka.
Haddii aad soo iibsato warshada hadhuudhka ah, mishiinka saddexda roller ayaa ugu fiican laakiin aad u qiimo badan. Xuubka macsarada ee hadhuudhku waxa uu u baahan yahay in si siman loo kala qaybiyo oo waliba si weyn u dhawro si si habboon loo shaandheeyo mashku inta uu dhan yahay spargeka. Saddexda rollers waxay bixiyaan natiijooyinka ugu fiican.
Waxaad heli kartaa macsarada hore loo shiiday ama waxaad u qaybin kartaa middaada si aad u cusubaato iyo sidoo kale kharash-badbaadinta. Way u qalantaa maalgashiga waxaana hubaal ah inay ilaalin doonto lacag caddaan ah. Augur ayaa laga yaabaa in lagu biiriyo si toos ah macsaradaada loogu raro mash tunka, taasoo lama huraan ah badbaadinta shaqada.
2) Nidaamka Mash-Lauter.
Duubka ka dib, ku mari tiro cayiman oo biyo ah mash-ka si aad u gaadhsiiso mugga wort ilaa awoodda.
Waxaa jiri doona bam koronto ah oo aan-birta lahayn oo lagu wareejinayo. Waxa hubaal ah in aad dheriga ku shidi doonto gaas ama kulayliyaha dhexe ee uumiga.
Kilidu waa tan, waa dheri weyn oo lagu uumiyo. Waxaa lagu sii daayaa saqafka sido kale waxay noqon doontaa dab toos ah oo leh gaas gubanaya ama waxaa ku duuban jaakadaha uumiga. Steam waa la isku halleyn karaa dheeraad ah.
Waajibkeeda aasaasiga ah waa diirigelinta biyaha si loo shiido. Brewers waxay ku xoqaan gudaha taangiyada kaydinta iyagoo isticmaalaya nadiifin kulul.
Haanta qamriga qabow ayaa shaqeysa, iyo sidoo kale raaxo. Weligay mid maan helin, taaha. Waxaad ilaalinaysaa biyo qabow oo keliya si aad u qaboojiso dacarka ka dib markaad karkariso.
3) Heat sarrifle.
Haanta aalkolada qabow waxay ku timaadaa meel ku habboon.
Waxaa jira kuleyliyeyaasha bangiga laba-laaban kuwaas oo ah kuwa ugu kalsoonida badan. Waxay marka hore ku qaboojiyaan biyaha soo galaya glycol, laga yaabee inay meesha ka saaraan baahida haanta Qabow-khamriga ah.
4) Hababka halsano.
Fermenters waa weelasha ay ku jiraan wort cayriin isla markiiba u beddela biirka. Sida sawirka ka muuqata, waxay yihiin cylindroconical. Waxay leeyihiin 45-60° koorta kor u qaada hoos u dhaca adkaha isla marka halsanogu noqdo wadarta: khamiirka dhintay, borotiinada caafimaadka qaba, hops, iyo sidoo kale khamiirka caafimaadka qaba. Tani waa in si sax ah loo nadiifiyo biirka.
Tani waa mid ka mid ah hababka waqti-qaadashada ee wax-soo-saarka. Halsano waxay socon doontaa 7-14 maalmood ee ales iyo 21-35 maalmood ee biirka. Waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa inaad haysato qalab halsano oo kugu filan oo diyaarsan oo aad diyaar u tahay inaad wax ka iibsato iyo sidoo kale la soco horumarka biirkaaga.
5) Brite taangiyada.
Taangiyada Brite waa weelasha biirka ee loo isticmaalo kaydinta, qaboojinta, kaarboonaynta, iyo baakadaha alaabta. Waxay yeelan doonaan saldhigyada cuntada iyo sidoo kale muraayadaha aragga (tuubo dhalo caato ah oo ku socota korka toosan ee weelka). Waxay sidoo kale yeelan doonaan dekedo loogu talagalay dhagxaanta kaarboonka iyo sidoo kale tusaale dicks (spigots yar) si loo go'aamiyo qiyaasta CO2.
Way ka qaalisan yihiin khamiiriyeyaasha maadaama saldhigyada cunto karintu ay yihiin hal darbi oo ay ka fudud yihiin in la sameeyo koollada.
Brewpubs waxay bixin doontaa biirka weelasha Brite. Tusaale ahaan, waxaad bixinaysaa canshuur iyadoo loo eegayo tirada ku jirta haanta. Weriyeyaasha wax soo saarka ayaa si dhab ah u bixin doona waajibaadka canshuuraha iyadoo ku saleysan waxa ka dhigaya sariirta sariirta iyo sidoo kale gelitaanka, hadday tahay birta, weelka, ama qorshaha dhalada.
6) Habka qaboojinta.
Weelasha beertu waxay leeyihiin jaakado qaboojiye. Waxay yihiin bir-laba- gidaar ah, gaashaan leh oo waxay leeyihiin qaybo waaweyn socodka coolant-propylene glycol.
Qaboojinta Glycol waxay ilaalisaa biirka oo joogto ah sidoo kale waxay ka hortagtaa horumarinta jeermiska waxayna sidoo kale diyaarisaa biirka iibka ah.
7) Valves iyo sidoo kale Tuubooyinka.
Waxaad u baahan doontaa 100' oo lagu daray 1.5-2" Brewers iyo sidoo kale Vintners tuubada wareejinta fayadhowrka. Waxay u dhexeeyaan $30 midkiiba darajada hoose ee SS barbed tri-clamp ilaa $150 alaab caano ah oo tayo sare leh oo ku habboon wax yar ilaa faruur ma leh.
200' Aqoonsi tuubo gaas ah oo la xoojiyay ayaa looga baahan yahay meelaynta, quudinta CO2 iyo sidoo kale O2 dhammaan geesaha warshadda.
Balanbaalis, goob, cadaadis, iyo sidoo kale lix nooc oo valves ah ayaa sida caadiga ah ka kooban qalabkaaga. Waa fikrad wanaagsan inaad hesho dheeraad ah.
Waxaad ka heli kartaa naxaasta iyo sidoo kale naxaasta xidhitaannada dukaamada tuubooyinka xaafadda. Kuwaas waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa biyo ama gaas sidoo kale aan ahayn kiimikooyin wax burburiya ama keena
Previous: Shixnaddii ugu dambaysay ee 2021
Xiga: Sidee buu u shaqeeyaa qoriga hop-ka?